Bangu-237 abantu abashone ezingozini zemigwaqo kule mpelasonto | News24
Bangu-237 abantu abashone ezingozini zemigwaqo kule mpelasonto
Durban - UNgqongqoshe wezokuThutha uDipuo Peters ukuqinisekisile ukuthi bangu-237 abantu abashone ezingozini ezingu-179 ezenzeke kusukela ngeholidi leNkululeko kuze kube ngukuphela kwale mpelasonto ende.
UPeters uthi ushaqeke kakhulu izingozi ezine ezenzeke kule mpela sonto lapho kushone abantu abangu-30.
Lezi zingozi zihlanganisa itekise eyashayisana neloli eRandfontein kwashona abantu abangu-15 nenye ingozi yetekisi edlule nemiphefumulo engu-9 eLimpopo.
OLUNYE UDABA:Zidlange kakhulu izingozi kuleli
Uthi ukhathazeke kakhulu ngabashayeli abashayela bedle amponjwana nokuyimbangela enkulu yezingozi.
Isifundazwe sakwaZulu-Natal yisona esihamba phambili ngezingozi ezingu-39 nokushona kwabantu abangu-49 kulandele iGauteng ngezingozi ezingu-29 nabantu abangu-45 abashonile kulandele iLimpopo ngezingozi ezingu-23 kanti khona bangu-39 abantu abashonile.